Meizu 17 wuxuu ku imaan doonaa shaashadda shaashadda Samsung | Androidsis
Meizu 17 wuxuu la imaan doonaa shaashad Super AMOLED ah oo Samsung ah
Weli waan sugeynaa Meizu 17, Terminalka soo socda ee waxqabadka sare ee soo saaraha Shiinaha kaas oo imaan doona markiisii ​​ugu dambeysay ee soo socota May 8, taariikhda rasmiga ah ee qalabka, taas oo aan xaqiijinay dhowr toddobaad ka hor.
Waxaan horey u soo bandhignay dhowr faahfaahin oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee mobilkan labadii bilood ee la soo dhaafay, marka ma heli doonno wax lala yaabo oo weyn oo ku saabsan wax kasta oo ay shirkaddu noo soo bandhigi doonto munaasabadda daah-furka. Si kastaba ha noqotee, waxaan sii wadeynaa inaan helno wararka ku saabsan, tan dambena waxay ku xiran tahay shaashadda taleefanka.
Samsung waxay noqon doontaa soo saaraha shaashadda Meizu 17
Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara taleefannada casriga ah - iyo aaladaha kale ee elektaroonigga ah - adduunka. Mid ka mid ah qaybaha ay sida weyn uga dhex muuqato waa kan shaashadaha, Meizu-na tan sifiican ayuu u ogyahay. Shirkadda Kuuriyada Koonfureed waxay bixisaa mid ka mid ah albaabbada ugu wanaagsan ee casriga ah maanta (iyo weligiisba).
Meizu 17 wuxuu balan qaadayaa inuu la imaan doono kan ugu fiican. Taasi waa sababta ay u adeegsan doonto shaashadda Samsung caadada u ah si aysan u niyad jabin hal xoogaa. Tani waxay noqon doontaa tiknoolajiyada Super AMOLED, 90 Hz waana horeyba loo xaqiijiyay oo si rasmi ah loogu shaaciyey boosta rasmiga ah, oo ah midka aan dhigno.
Meizu 17 shaashadda shaashadda
Waxyaabaha xayeysiinta ah waxay qaadanayaan fursad ay ku xaqiijiyaan daloolka shaashadda Meizu 17 iyo birta yar ee ku taal xagga hore waxayna bixiyaan khibrad shaashad aan dhammaad lahayn.
Xusuusnow in qalabku uu yeelan doono Qualcomm's Snapdragon 865 chipset, oo ah waxqabad heer sare ah oo loogu talagalay kaliya calaamadaha ugu awoodda badan xilligan. Waxay sidoo kale la imaan doontaa kaydinta UFS 3.1, kaamirooyinka gadaal ee 64MP, rikoodhada hadalka, 30W taageerada degdegga ah, iyo Wi-Fi 6.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meizu 17 wuxuu la imaan doonaa shaashad Super AMOLED ah oo Samsung ah
Stadia 2.16 ayaa fiirisa wararka soo socda iyada oo loo marayo koodhka ilaha
Google Stadia wuxuu hadda la jaan qaadayaa OnePlus 8 iyo OnePlus 8 Pro